Yangon | Yangon Region | Myanmar | Nissan | Myanmar No.1 Car Site for New Car & Used Car - MyanmarCarMarketplace.com | Nissan Juke 2011
Nissan Juke 2011 - 348.00 Lakhs
1500 cc ,2WD
ရန်ကုန်လိုင်စင် 7N , Black , RX type V
Grade မြင့်၍လူကြိုက်များသော အတွင်းခန်း အနီရောင်
Push start , Smart Key , Digital Aircon , Original TV & Backcam
Original Alloy with New Tyre
3 Mood Driving (ဆီစားသက်သာသော Eco mood,ပုံမှန်မောင်းနှင်ရန်အတွက် Normal mood,ကားကျော်ရန်နှင့်အမြန်မောင်းလိုသူများအတွက် Sport mood)
09797585857 , 095016941
Nissan Juke GrandTour 2010
Nissan Juke GrandTour 2010 •အနကျ‌ရောငျ SAPPHIRE Black B20 R •Kilometer 83000 •????16GT Grade က‌တော့ 1600CC MR16DDT Turbo ENGINE နဲ့လာပါတယျ။ မွငျး ‌ကောငျ‌ရေ 190 horse power maximum ထှကျပွီး ဆီမစားပဲ 3000CC Engine နီးပါး အဆှဲအရုနျး ကောငျးပါတယျ•ENGINE, ...
Nissan Safari 1998 4.2 diesel turbo Auto gear 4WD ခုံသုံးတန်း​ ၇ ​ယောက်​စီး Digital Ac Round Ac IRON MAN ​ရှော့ဘား ကွိုင်​ စ​နော်​ကယ်​ တပ်​ပြီး Engine oil auto oil အသစ်​ licen အသစ်​ဝင်​ပြီး Engine အ​ငွေ့မရှိ pump ​ကောင်း Price 335 ညှိနှိုင်း အလဲအထပ်...
Luxury ဇိမ်ခံSaloonကားလေးကို ဆီစားသက်သာ၊ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရုပ်ထွက်အလန်းလေးစီးနိုင်ဖို့ Nissan Latio ကားရှယ်လေး တစ်စီးရောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ Nissan Latio For Sale ! Model - 2012 (November) Colour - Coffee Brown Engine - 1200 Cc with Turbo / 2Wd Pure Driv...